Wasiir Beyle oo guddoomiyay Shirka Wasiirada Maaliyadda Dowladda Dhexe & dowlad goboleedyada | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wasiir Beyle oo guddoomiyay Shirka Wasiirada Maaliyadda Dowladda Dhexe & dowlad goboleedyada
Muqdisho (Halqaran.com) – Sii-hayaha wasiirka maaliyadda xukumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa Talaadadii maanta guddoomiyay shirka wasiirrada maaliyadda ee dowlada goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe kaasi oo ku qabsoomay habka muqaalka fogaan arraga.
Shirkan ayaa waxaa looga hadlay sidii xoogga lagu saari lahaa horumarinta dhaqaalaha dalka.
“Waxa markale inoo qabsoomay shirkii maaliyadda dalka ee u dhexeeyay wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada iyo dowladda federal ka Soomaaliya. kaasi aan had iyo jeer diiradda ku saarnaa horumarinta dhaqaalaha dalka iyo wada shaqeynta‘‘, Ayuu yiri Beyle.
Wasiirka maaliyadda dalka Cabdiraxmaan Ducaale bayle ayaa sheegay inay ka go’antahay in si wadajir looga wadashaqeeyo kobcinta dhaqaalaha dalka.
Shirka Wasiirada Maaliyadda Dowladda Dhexe